Dalwadda Somalia oo ka noqotay aqoonsigii ay u fidisay maamulkii fashilmay ee Khaatumo | Berberanews.com
Home WARARKA Dalwadda Somalia oo ka noqotay aqoonsigii ay u fidisay maamulkii fashilmay ee...
Dalwadda Somalia oo ka noqotay aqoonsigii ay u fidisay maamulkii fashilmay ee Khaatumo
Muqdisho-(Berberanews)-War-saxaafadeed maanta ka soo baxay Xafiiska Raysal-wasaaraha dawladda Somali, ayaa lagu caddeeyay inaan dawladda-ku-meelgaadhka ahi aqoonsanayn jiritaanka maamulkii fashilmay ee Kooxda Cali-khaliif gadhwadeenka u ahaa.
War-saxaafadeedkan oo uu ku saxeexanyahay Ku-simaha Raysal-wasaaraha ahna Wasiirka Beeraha Maxamed Maxamuud Xaaji-Ibtaahin, ayaa lagu sheegay in maamulka Khaatummo State aanu buuxin Karin shuruudaha nidaamka federaalka Somalia, kaasoo dhigaya in ay maamul-gobolleed sammaysan karaan laba amma ka badan 18-kii gobol ee Somalia lahayd.
“Hadana, anigoo tixraacaya qabyo-qoraalka Distoorka DFKMG qoraalkiisa qeeyaxaya sammaynta dawlad goboleedyada cusub, waxa ii cadaatay in maamulka la baxay Khaatummo aanu buuxin shuruudahaas loona aqoopnan Karin maamul-goboleed.”ayaa lagu yidhi War-saxaafadeedka.
Todobaadkii hore ayay ahayd markii Wasiirka Federaalka Distoorka Dalwadda Somalia ku dhawaaqay inay aqoonsadeen maamulkii fashilmay ee tuurta u saarna Cali-khaliif Galaydh iyo koox tiro yar oo dano siyaasadeed ku raadsanaya.
Previous articleWaxaad ceebta utaqaan dadbay camalkooda tahay..
Next articleKenya: Hawlwadeennada Caafimaadka oo shaqojoojon sammeeyay